Guddiga Doorashada Galmudug oo beeniyay war ka soo baxay Mareykanka
Iyadoo dhawaan Warbaahinta ku hadasha Afka Soomaaliga ay baahinayeen Warqad la sheegay in Dowladda Mareykanka ay u dirtay Galmudug islamarkaana ay ku sheegtay Kuraasta qaar in la Musuq Maasuqay oo Sifo aan Sharci aheyn ay ku soo baxeen Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad iyo Maxamuud Gaafow ayaa Warkaas waxaa beeniyay Guddiga Doorashada dadban ee Maamulka Galmudug.
Afhayeenka Guddiga Doorashada dadban ee Galmudug Yuusuf Diiriye ayaa sheegay in warkaasi uu yahay been aan sal iyo raad laheyn islamarkaana ay Muwaadiniintaas ku soo baxeen si Sharci ah oo Waafaqsan Nidaamka u degsan Doorashada.
“Waxaan u sheegeynaa dadka warkaas wada in aysan jirin Kuraas dib loogu laabanayo in mar kale la doorto,waayo Doorashadu waa mid ku dhacday si hufan oo Xalaal ah,Doorashadana waxaa leh Soomaaliya si Caddaalad ay ku dheehan tahayna wey ku dhacday”ayuu yiri Afhayeenka Guddiga Doorashada Galmudug.
Nin Derbi-jiif Maraykan ah oo feeray Nin Somali ah oo ku hadlayey Afsomali.
Cornell White oo 56 jir ahna Derbi-jiife aan Hoy lahayn ayaa lagu soo oogay inuu Nin Somali oo ku hadlayey Luqadda Soomaaliga ku dhex feeray Bas ka mid ah Basaska Dadweynaha ee ka dhex shaqeeya magaalladda Minneapolis.
Dhacdadan oo dhacday bishan November 19-da ayaa waxa uu Eedeysanaha feeray Ninka Soomaaliga oo la hadlayey nin kale oo Soomaali oo la socday.
Dhibanaha ayaa u sheegay Boliska inuu Ninkaasi feeray, ka hor inta uusan ku khasbin inuu ku hadlo Luqadda Englishka.
Ninka Soomaaliga ayaa la sheegay in feerkii lagu boobsiiyey looga dhaawacay isha bidix.
Eedeysanaha waxaa kaloo lagu sheegay inuu Dhibanaha aflagaadeeyey, kuna yiri Erayo Midab-sooc iyo Anshax-xumo kale lahaa.
Kameerada Qarsoon ee Baska ayaa laga daawaday falka feerka iyo aflaagada ee loo geystay Muwaadinka Soomaaliga.
Boliska waxay Eedeysanaha ka helean xaddi yar oo Daroogo ah oo uu watay, waxayna Maxkamaddu sheegtay inuu Eedeysanaha muteysan doono Xabsi 6 sanno ah.